Waxyaabaha sannadkan ku Cusub Carwada Caalamiga ah ee Buugaagta Hargeysa oo bandhiggeedii 12 maanta la daah-furay | Salaan Media
Waxyaabaha sannadkan ku Cusub Carwada Caalamiga ah ee Buugaagta Hargeysa oo bandhiggeedii 12 maanta la daah-furay
July 20, 2019 | Published by: Hamse
Hargeysa (SalaanMedia)- Munaasibadda Bandhiga Caalamiga ah 12-aad ee Buugaagta Hargeysa, ayaa ahayd mid si weyn loo soo aggaasimay, isla markaana maanta si rasmi ah Madaxweyne Ku-xigeenka Somaliland uga furay Xarunta Dhaqanka ee magaalada Hargeysa oo soo qaban-qaabisa Carwada Buugaagta.
Bandhigga Buugaagta Caalamiga ah ee Hargeysa International Book Fair oo sannadkan dalka Masar marti ku yahay, waxaa ka soo qaybgalay 92 Xubnood oo kala kala socda 23 dal, Safiirrada Somaliland iyo Soomaaliya u qaabbilsan Midawga Yurub Nicolás Berlanga, Safiirka Jarmalka Ambassador Annett Günther iyo Ku-xigeenka Safiirka Masar Mohamed Emat El-ginw, Qorayaal, Abwaanno, Hal-abuur kala duwan, Gabadh ay walaalo yihiin Madaxweynihii hore ee Maraykanka Mr. Obama, Wasiirro, Xildhibaanno, Masuuliyiinta Xisbiyada Siyaasadda, Mudan iyo Marti-sharaf kale.
Guddoomiyaha Xarunta dhaqanka Dr. Jaamac Muuse Jaamac, ayaa ugu horreyn halkaas ka hadlay, waxaanu sheegay in sannadkan dalka Masar oo ka mid ah Dalalka Afrika ee lagaga hadlo Luuqadda Carabiga uu marti ku yahay Bandhigga 12-aad ee Buugaagta Hargeysa. Jaamac waxa uu xusay in ay fursad u tahay maaddaama ay jiraan dhalinyaro Somaliland u dhashay oo ku hadla Luuqadda Carabiga, kuwaas oo uu sheegay inay ka faa’idaysanayaan fursaddaa.
“Anigoo ku hadlaya magaca Xarunta dhaqanka Hargeysa iyo kooxda soo fududaydisay munaasibaddan layaabka leh, waxaan idinku soo dhawaynayaa 12-guurada Xarunta Dhaqanka Hargeysa iyo Bandhigga Caalamiga ah ee Hargeysa International Book Fair 2019.” Sidaa ayuu yidhi Dr. Jaamac.
Guddoomiyaha Xarunta Dhaqanka ee Hargeysa, Jaamac Muuse, wuxuu sheegay in sannadkan uu Halku-dhega Bandhiggu yahay, Wada-noolaansha Bulshada oo uu sheegay in ay ka turjumayso munaasibadda Bandhigga 12-aad ee Buugaagta Hargeysa ee sannadkan oo Hargeysa lagu qabtay 20 July 2019. “Waxa innala jooga 92 Ergay oo ka kala yimi 23 dal oo caalami ah. 92-kaa Qof waxaan rabnaa inay noqdaan 92 Safiir oo arka quruxdiinna, wanaaggiinna, dhalinyarada Somaliland siday yihiin iyo Qaranka Somaliland siduu yahay, dibeddana geeya farriintaas oo yidhaahda waxaannu soo aragnay meel ka duwan Afrika inteeda kale, oo Buugaagta la jecelyahay, qoraalka la jecelyahay, Suugaanta la jecelyahay, wada-noolaanshaha la jecelyahay.” Sidaa ayuu yidhi Jaamac Muuse Jaamaac.
Edna Aadan Ismaaciil, ayaa iyana furitaankii Bandhigga caalamiga ah ka hadashay, ayaa hambalyada iyo mahad-naqa Xarunta ka sokow, waxay sheegtay in Somaliland leedahay xuduudo mucayim ah oo la garanayo, waxayna xustay in Somaliland ku faanto inay kusoo caana-maashay nabadgelyo, kala danbayn iyo dumuquraaddiyad dunidu ku majeeratay. Waxay sheegtay in Somaliland qabatay doorashooyinka Madaxweynaha saddex Jeer, laba jeer oo golayaasha deegaanka, tartanka Ururrada Siyaasada ah iyo Baarlamaanka xilliganna ay diyaar u tahay inay qabato doorashooyinka golayaasha Baarlamaanka iyo deegaanka. Waxay ku doodday inaanay Somaliland iyo Soomaaliya ahayn laba la is-barbar-dhigi karo nidaam ahaan iyo degganaansho ahaan toona.
Ku-xigeenka Safiirka Masar Mohamed Emat El-ginw, ayaa sidoo kale ka hadlay munaasibada bandhiga Bugaagta ee Hargeysa, waxaanu ka warramay taariikhda dheer ee k a dhaxaysa Somaliland iyo dalkiisa Masar, isla markaana waxa uu ammaanay nabadgelyada Somaliland iyo nidaamka dumuquraadiyadeed ee ka jira Somaliland, isaga oo wax lagu faano ku tilmaamay Xarunta Dhaqanka ee Hargeysa ee Dadka tirada badan ee dalalka caalamka ka kala yimi iyo aqoonyahankaba kulmisay.
Safiirka Jarmalka Ambassador Annett Günther, waxaanay tidhi; “Waxaan ku faraxsanahay inaan ka soo qaybgalo Carwadan Caalamiga ah ee Bandhigga Buugaagta Hargeysa. Carwadan iyo sida looga soo qaybgalay waxay muujinaysaa dhaqanka iyo farshaxanka sida halkan looga jecelyahay. Hal-ku-dhegga sannadkan oo ah wada-noolaansho, waxay muujinaysaa siday da’yarta u doonayaan inay nabad ugula noolaadaan Bulshooyinkooda, farriintaasna waan qaadi doonnaa. Jarmalku wuxuu taageerayaa horumar kasta oo Somaliland samayso.”
Safiirka Midawga Yurub u Qaabbilsan Somaliland iyo Soomaaliya Amb. Nicolás Berlanga Martínez oo ka mid ahaa Diblamaasiyiinta ka qaybgalay Bandhigga Bugaagta, ayaa ka hadlay Nabadgelyada, degganaanshaha iyo xasilloonida ka jirta Somaliland, waxaanu sheegay inay tahay wax lagu faano waxa ay qabsatay Somaliland.
Ambassador Nicolás Berlanga Martínez, waxa uu markii uu ka hadlayay Madasha si lama filaan ah ugu Lebistay Koofiyadda Odayaasha iyo Cumaamadda Madaxda dhaqanka Soomaalidu qaadato oo uu madaxa iyo garabka saartay, isagoo muujinaya dhaqanka ay ka turjumayso Xarunta Dhaqanka ee Hargeysa oo boqollaal qof oo Soomaali iyo Ajaanib ah ay ka qaybgaleen. “Maanta (shalay) ii oggolaada inaan ahay Oday dhaqameed reer Yurub ah oo Somaliland jooga. Farxad bay ii tahay inaan arko Buugaag ku qoran afaf kala duwan iyo kuwo ay sixitaan ku samaysay xarunta dhaqanka ee Hargeysa. Midawga Yurub farxad bay u tahay inuu taageero arrimaha noocan oo kale ah.” ayuu yidhi, Ambassador Berlanga oo mar keliya munaasibaddii u beddelay sacab iyo qosol lagu soo dhowaynayo lebiska uu xidhay iyo siduu u beddelay muuqaalka manbarka isla teegay markii uu kacay.
Sidoo kale, waxa munaasibadaa hadalo ka jeediyay Masuuliyiiinta Xukuumadda Somaliland, madaxweyne ku xigeenka Cabdiraxmaan Saylici, Wasiiradda, Arrimaha Guddaha, Maxamed Kaahin, iyo Wasiirka Maaliyadda Dr. Sacad Cali Shire, kuwaas oo dhammaantood sheegay ahmiyada ay munaasibada Bandhiga Bugaagta Hargeysa u leedahay muqaalka iyo sawirka dunida ee Somaliland, sidoo kale wax aka hadlay Dublamaasiyiin uu ka mid yahay Safiirka Jarmalka Ambassador Annett Günther iyo Aqoonyahan ka yimi dalalka dunida ee qaaradaha dunida.
Madaxweyne Ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil (Saylici), ayaa si rasmi ah u furay Bandhigga, ayaa sheegay inay farxad u tahay ka qaybgalka Bandhigga 12-aad ee Carwada Buugaagta Hargeysa, waxaanu yidhi; “Waxaa farxad weyn ii ah, dhammaanteenna farxad u ah inaan ka soo qaybgalno Bandhigga caalamiga ah ee Buugaagta Hargeysa sannadkii 12-aad, oo qiimo weyn innagu jooga. Waxaan marka hore u mahad-naqayaa dhammaan martida sharafta badan ee dunida dacalladeeda innooga timi ee inna soo sharaftay.”
Gebegebadii, waxa madasha lagu soo bandhigay Ciyaaraha iyo Heesaha Dhaqanka Soomaalida qaarkood, waxaana loo gudbay qaybaha kale ee Barnaamijka ee Khudbadaha Martida Barnaamijka, iyagoo ay halkaas lagjarro ka jeediyeen Gabadh ay Madaxweyne Obama walaalo yihiin iyo Abwaan Siciid Saalax, qaybaha gelinkii dambe iyo xalay, ayaa iyaguna ahaa bandhigyo Suugaaneed, Farshaxan, doodo, su’aalo iyo jawaabo hadba cidda minbarka sare fadhida la weydiinayey oo ay ka jawaabayeen.
DAAWO:-Mamulka Jamacada Culuumta Caafimadka Ee ADAL Oo Soo Dhaweyay Dhakhatir Ajaniba
DAAWO:-Somaliland Oo Qabanaysa Tartanka Ciyaaraha Gobolada
Gudida Wanaag farista In La Joojiyo Showyada Hargeisa Lugu Qabanaya
DAAWO:-Afhayeenka Madaxtooyada Oo Faahfaahin Ka Bixiyey Xeerar Ay Golaha Wasiiradu Maanta Ansixiyeen
DAAWO:-”Heshiiskii KHAATUMO Wuxuu Saaran Yahay Miiska Madaxweynaha Saxeexiisa Kaliya Uun Baa Dhiman” Faysal Cali Waraabe
Muqaal:Fanaanad eedaymo usoo jeedisay madaxwaymaha somaliland oo cadaadis kala kulantay qosykeeda.
Muqaal:Fanaanadda Sahra Ilays Oo Sheegtay In Lagu Cunsuriyeeyey Heeso Ay U Qaaday Somaliland.
Muqaal:Dood ku Saabsan Doorashada Ingiriiska iyo Cida ku Soo bixi karta.
Daawo “Hawlgalka Ay Galaan & Mushaharka Ay Qataan Ismalaha”
BALIGUBADLE: Dibadbax Balaadhan Oo Lagaga Dareen Celiyay Xeerka Degmooyinka